ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: မနောမြေမှကျောင်းသားတပ်မတော် အပိုင်း (၇) .. ဘန်ကောက်သို့ ခရီးစဉ်
မနောမြေမှကျောင်းသားတပ်မတော် အပိုင်း (၇) .. ဘန်ကောက်သို့ ခရီးစဉ်
by Nang Aung Htwe Kyi on Saturday, November 24, 2012 at 9:37am ·
အခုရေးတဲ့ ခရီးစဉ်မှာ ကျမရဲ့ မှတ်စုတို တချို့ ပျောက်ဆုံးသွားပါသဖြင့် ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ရွာအမည်အားလုံးကို
မမှတ်မိတော့ပါ.. ထို့အတွက်တောင်းပန်ပါသည် ။မြို့ရွာအမည်များကိုလည်း မြန်မာအသံထွက်ဖြင့်ရေးသားရ
တရုပ်နိုင်ငံ မုန်းမန်းမှထွက်ခွာပြီး လောနိုင်ငံ မုန်းဆင်(Muang Sing)ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်။မုန်းဆင်မှာ ကျမ
တို့ လောဝ်နယ်ခံပုလိပ်အိမ်မှာဘဲတည်းခိုခဲ့ကြပါတယ်။ပုလိပ် မိန်းမကိုယ်တိုင်လမ်းပြအဖြစ်လိုက်ပါမှာဖြစ်
ကျမရယ် လောဝ် ကပုလိပ်မိန်းမ နှင့် စိုင်းခမ်းပမ်းတို့၃ ဦး မုန်းဆင်(Maung Sing)မှကားဖြင့်ခရီးဆက်
လူများကကားခေါင်မိုးပေါ်မှစီးနင်းလိုက်ပါကြရပါတယ်။တလမ်းလုံး ဝက်အော်သံ ဝက်မစင်နံ့များဖြင့်
ဒီလိုကားမျိုးစီးပြီးခရီးမထွက်ဘူးလို့အတွေ့အကြုံတမျိုးပေပါ့လို့။နေကလည်းပူပြင်း ၊ ကိုယ်တွေကခေါင်
မိုးပေါ်မှာဆိုတော့အရိပ်အကာမရှိ။ချွေးတဒီးဒီးကျ ဖုံတွေကကပ် ။လမ်းတွေကဆိုး ။ဖုံတထောင်းထောင်းနဲ့
ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော့မမြင်ရ ၊ဘေးကလူတိုင်းကြည့်ရ မြင်ရတာတော့ မျောက်ဖြူတွေနှင့်တူနေပြီ။ဝက်တွေက
အမိုးအကာအောက်မှာဆိုတော့ပူပြင်းနေဒဏ်မခံစားရတော့မတွေးစဘူးတွေးမိတယ် ။ ဝက်ကခုချိန်မှာကိုယ့်
ထက်ကံကောင်းတယ်လို့ ။တော်တော်ခေါင်တဲ့လမ်း၊ လမ်းတောက်လျှောက်ကျမတို့ကားတစင်းဘဲရှိ
တယ်။လမ်းတွေကလည်း လမ်းလို့ဆိုရရုံပါဘဲ။မနက်စောစောကတည်းကထွက်တာ၆ နာရီလောက်ကြာ
အောင်ဖြေးနှေးစွာခရီးနှင်ပြီးမှရွာလေးတရွာရောက်ပါတယ်။ရွာသာဆိုတယ် အိမ်ခြေ ၅ လုံးခန့်သာရှိတယ် ။
ညှင်းပေါင်းနဲ့လောဝ် ဝက်အူချောင်း၊ငရုပ်သီးထောင်းနဲ့ နေ့လည်စာစားဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ကားသမားလည်း
ဆီဖြည့်တယ်။တော်တော်ခေါင်တဲ့ရွာကလေး ။နေကတော်တော်ပူပြင်းတာဘဲ။အပူဒဏ်ကိုခံစားရင်း အမြဲ
တမ်းအေးမြနေတဲ့လိုင်စင်မြေကိုလွမ်းမိပြန်ရော။တကယ်တော့လောဝ် မြို့တွင်းလမ်းဖြစ်တဲ့ HOUAYXAY
မြို့လမ်းအတိုင်းဆိုရင်လမ်းကောင်းတယ် ၊ အချိန်တိုတိုနဲ့ရောက်တယ်။ မဲခေါင်မြစ်ဖြတ်တာနဲ့ ယိုးဒယား
နိုင်ငံ ချိန်းဟောင်(Chianghong) ကိုရောက်တယ်။ဒါပေမဲ့ ကားလမ်းတောက်လျှောက် အစစ်အဆေးတွေ
ရှိတယ်ဆိုတော့ ဒီလမ်းအသုံးပြုတာအကောင်းဆုံးလို့ဒေသခံတွေပြောတာနဲ့ ကျမဒီလမ်းရွေးချယ်ခဲ့တာ။
တနာရီလောက် ခြေလက်ဆန့်ပြီးတော့ အားလုံးကားပေါ်ပြန်တက် ခရီးဆက်ကြရပြန်တယ်။ဒူးဆစ်လောက်
အနက်ရှိတဲ့ ရေချောင်းရောက်တော့ အားလုံးကားပေါ်ကဆင်းကြ၇တယ်။ တံတားမရှိဘူးဆိုတော့ ကားနဲ့
ဝက်နဲ့ဘဲ ရေချောင်းထဲ မောင်းချသွားတာ။လူတွေကတော့ ရေအဆိုခံပြိးရေချောင်းကူးကြရပြန်တယ်။ကား
လမ်းဆိုးတော့ ဖြေးဖြေးဘဲမောင်းကြတာ။တနေရာရောက်တော့ ကားရပ်ပေးတယ် ။ ဆက်သွားရင် အရှေ့
မှာ ဂိတ်စစ်ဆေးတယ်ဆိုတော့ ကျမနဲ့ လမ်းပြ ရယ် အချို့ ခရီးသည်တွေရယ် တောလမ်းအတိုင်းလမ်းလျှောက်
ကြတယ် ။ တောင်တက်လမ်းပေါ့။ ၃ နာရီလောက်တောင်အတက်အဆင်းလုပ်ရတယ်။ ည မှောင်လာတော့
မီးမသုံးကြဘူး ။ကျမက တောထဲကထွက်ခဲ့သူဆိုတော့ အလေ့အကျင့်ရှိနေလို့ အပင်ပန်းခံနိုင်ခဲ့တယ်။ တောထဲ
တိတ်ဆိတ်စွာဖြတ်သန်းနေရင်း ကိုယ်နဲ့ အတူ လျှောက်နေကြသူတွေအကြောင်းမဆီမဆိုင်စဉ်းစားမိတယ်။သူ
တို့ကရောဘာအတွက်နဲ့စစ်ဆေးမှု့တွေရှောင်တာလည်းပေါ့ ။ဘယ်သူတွေလည်းပေါ့ ။ရာဇဝတ်သားတွေလားပေါ့။
ကျမခြေထောက်မှာ ဓါးမြှောင် ၂ ခု ကပ်ချည်ထားတယ်။ တခုကပီထွန်းပေးထားတာ swiss made . တခုကတရုပ်
မှာကျမဝယ်ထားတာ။ ညခရီး နားလိုက်တက်လိုက်နဲ့ ကျမ အနောက်ပိုင်းနားကလိုက်တယ်။နောက် အဆင်းလမ်း
တွေကြီးဖြစ်လာတော့ ကျမ အရှေ့ဆုံးကချီတက်တော့တာဘဲ။သူတို့တွေပြောပြီးရီကြတယ်။ သူတို့ပြောတဲ့ရှမ်း
စကားတွေက ကျမတို့ ကျိုင်းတုံ ဘက်ကရှမ်းစကားနဲ့အတော် တူနေတာဆိုတော့ နားလည်တယ် ။အဲ့ဒီမှာမှကျမ
သိလိုက်ရတာက ကျမတို့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေ တရုပ်၊လောဝ် ဘက်တွေမှာပါ ပြန့်နှံ့ နေတာကိုဘဲ ။ ငယ်ငယ်
ကစာဖတ်အားနည်းတော့ ကျမဘာမှ မသိဘူးလေ။ ခုကြီးလာတော့လည်း နည်းတာပါဘဲ ။ ရှက်ရှက်နဲ့ အရိုးသား
တောင်ကုန်းအဆင်းအပြီး လမ်းပြေပြေလေးလျှောက်တော့ အိမ်ခြေ ၇ လုံးလောက်ရှိတဲ့ ရွာ အနောက်ဖက်ကို
ရောက်တယ်။ကား ကကျမတို့ကိုစောင့်နေကြတယ်။ ကျမတို့ ကားပေါ်တက်ပြီးခရီးဆက်ကြတယ်။ နောက်
ရွာတရွာကိုရောက်တော့ အားလုံးဆင်းကြတယ်။ ဒါပါဘဲ ။ဒီရွာမှာ ကားလမ်းခရီးဆုံးတာဘဲ။မှောင်နေစဲဘဲ ။
အချိန်ကြည့်လိုက်တော့ ၂ နာရီ ခွဲ နေပြီ။ ရွာအမည်က ချိန်းကုတ် ( Chian Kok )တဲ့။ နေစရာအိမ်ကို လောဝ်
ပုလိပ် မိန်းမရှာပေးတယ်။ပစ္စည်းတွေချပြီး ရေချိုးဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်။ကားရပ်တဲ့နေရာ ကနေလမ်းအတိုင်း မီတာ
၇ဝဝ လောက်လျှောက်လိုက်ရင် နာမည်ကျော် မဲခေါင်မြစ်ကိုတွေ့ရပါတယ် ။ဒါ ကျမရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်အောင်
ခရီးဆက်ရမဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။မနက်လင်းခါနီး ၃ နာရီလောက်မှာမှ မဲခေါင်မြစ်ရေချုိုး၇ပါတယ်။ခက်တာက ကျမက
ရေမကူးတတ်တော့သူများတွေလိုဇွတ်ရွတ်မဆင်းရဲဘူးလေ ။ေ၇စီးလဲကြမ်းသေးတယ်ဆိုတော့ ။
၁၉.၄.၁၉၉၃ ( တနင်္လာနေ့)
မိုးလင်းခါနီးမှာမှအိပ်ယာဝင်ကြတော့ မနက် ၁၀ နာရီ လောက်မှာမှ အိပ်ယာထဖြစ်တယ်။ လမ်းပြ ၂ဦးကတော့
ရွာထဲမှာရှေ့ခရီးစဉ်အတွက် သွားစုံစမ်းနေကြတယ်။မကြာပါဘူး နှစ်ယောက်သားအပြေးအလွှားပြန်လာကြပြီး
သဗ္မာန်ရောက်နေပြီ ။ခရီးဆက်ထွက်ကြမယ်ဆိုတာနဲ့ ကျောပိုးအိတ်ဆွဲ ပြီးမဲခေါင်မြစ်ဘက်ပြေးကြပါတယ်။
လာပြန်ပါပြီနောက်တခေါက် .. တိရိစ္ဆာန်တင်တဲ့ သဗ္မာန်တစင်းကမ်းပါးမှာစောင့်နေပါတယ်။နွားနဲ့ဝက်တွေ
အပြည့်တင်ထားပါတယ်။ခရီးသည်ဆိုလို့ ကျမနဲ့ လမ်းပြ ၂ ဦးနဲ့ဘဲရှိတယ်။ကျန်တာတွေကသဗ္မာန်အလုပ်
သမားတွေပါ ။ ကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝတွေနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့လို့နဲ့တူပါတယ်။အသွင်အပြင်တွေက ကြောက်စရာတွေ။
စိတ်ထားတွေကြပြန်တော့ရိုးသားဖြူစင်ကြတယ်။ချိန်းကုတ် (Chian Kok) ကထွက်ပြီး၂ နာရီလောက်ခရီး
ဆက်တော့ သဗ္မာန်သမားတွေကျွေးတာစားကြတာဘဲ။ကောက်ညှင်းနဲ့ငရုပ်သီးထောင်း ၊ငါးကင် ကျမတ
သက်မမေ့နိုင်ဘူး။လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် မို့လား၊ မနက်ကတည်းကဘာမှမစားရသေးလို့လားမသိဘူး။
စားကောင်းတယ်။ စားပြီးတော့မှ သဗ္မာန်သမားတွေနဲ့ရင်းနှီးမှု့ရလာတော့ သဗ္မာန်အရှေ့ဘက်မှာထွက်ထိုင်
ဖြစ်ပြီး သဘာဝအလှတွေ ခံစားမိတယ်။
အဖြစ်က အိပ်မက်ဆန်နေတယ်။ကိုယ်ငယ်စဉ်ကဖြစ်ခြင်ခဲ့တာ အမြဲစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တာက ဂီတအနုပညာရှင်သ
ပြုလုပ်ခဲ့တာက ABSDF-NB က တော်လှန်ရေးသမားတယောက်၊ ဒါပေမဲ့ အတင်းအဓမ္မပြုခြင်းကြောင့်ကိုယ့်
ကိုကိုယ်ထွက်ဆိုခဲ့ကြရတာက NIB ဒုဗိုလ် ထလရ ပါတဲ့။ကျမရဲ့ ထလရ ကိုယ်ပိုင်နံပတ် ၁၇၅ဝ ဆိုတာက
နော်။ NIB က ဗိုလ်ကြီးရာထူးယူခဲ့ရသူတဦးကသူ့ကိုယ်ပိုင်နံပတ်ကိုအမြဲမှတ်မိနေအောင် ၁ဝ တန်းခုန်နံ
ပတ်ပေးခဲ့ပါသတဲ့။ဖြစ်အင်တွေများတော့ငိုအားထက်ရီအားသန်တာလား ၊ ရီအားထက်ဘဲငိုအားသန်ခဲ့တာ
လား။ကျမတို့ အယောက် ၁ဝဝ နင့်နေအောင်ခံစားခဲ့ရတယ်။ရက်စက်မှု့ဒဏ်တွေနဲ့ ၁၄ ဦးသေခဲ့ကြရတယ်။
၁၆ ဦး ရက်စက်စွာခေါင်းဖြတ်သတ်တာခံခဲ့ရတယ်။ ၂ ဦးသေနပ်နဲ့ပစ်သတ်တာခံခဲ့ရတယ်။ ၅၅ ဦးထွက်ပြေး
တော့ ၁ ဦးလမ်းမှာသေဆုံးခဲ့တယ်။စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာ ၄ ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။
၉ ဦးလွတ်မြောက်ပြီး ကျောင်းသားတပ်မှာပြန်တာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်။၉ ဦးထဲကကျမတယောက်ကတော့
ထက်တိတ်ဆိတ်တဲ့တောတောင်သဘာဝကိုပိုနှစ်သက်တယ်။ဒီလိုနဲ့ည ၈ နာရီလောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ် ။
ကျိန်းလောဆိုတဲ့ရွာလေးကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ တညအိပ်စခန်းချရတာပေါ့.။ ဒေသခံလူတွေသိပ်ရိုးသားကြတာ
ဘဲ။ကျမတို့ကိုတည်းခိုခွင့်ပေးပြီးရှိတာလေးတွေချက်ပြုတ်ကျွေးကြတယ်။ကျမသတိထားမိတယ်။ လောဝ် မှာ
ကျမဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့တောက်လျှောက် ထမင်းထက် ကောက်ညှင်းချက်စားကြတာများတယ်။ကောက်ညှင်းနဲ့
လေဝ် ဝက်အူချောင်းနဲ့ငရုပ်သီးထောင်းနဲ့ ကအရမ်းလိုက်ဘက်ညီတယ်။
၂ဝ. ၄ . ၁၉၉၃ ( အင်္ဂါနေ့)
မနက်စောစောကျိန်းလောမှ ထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။ မဲခေါင်မြစ်တလျှောက် သဘာဝရဲ့ သာယာမှု့တွေကိုငေးမော
နေရင်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေစဉ်းစားကြည့်ရင်း မယုံကြည်နိုင်ခဲ့ဘူး။ဘဝမှာတခါမှ စိတ်ကူးထဲမထဲ့ခဲ့တာတွေ ကြံဖန်
ဖြစ်ခဲ့တာတွေ..။ မဲခေါင်မြစ်တလျှောက် ရှုခင်းတွေတအားလှတာဘဲ ။ သမ္ဗာန် သမားတယောက် ကျမနားလာ
ထိုင်ပြီးစကားပြောတယ် ။ ရှမ်းစကားပြောပေမဲ့ လေယူလေသိမ်းကွာတော့ ဒေသခံမဟုတ်မှန်းသိတယ်လေ။
ပြောလာခဲ့တော့မှ သူလည်းဒေသခံအစစ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ကမ္ဘောဒီးယားကဖြစ်နေတယ် ။သူကလည်း သူ့
ဘဝတစိတ်တဒေသရင်ဖွင့်ခဲ့တယ်။ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်မှု့တွေက လွတ်မြောက်ခဲ့ကြတာခြင်းတော့တူ
ပါတယ်.။ အခြေအနေခြင်း တော့ကွာခြားတာပေါ့လေ ။လမ်းတဝက်မှာ သမ္ဗာန်ဆိုက်ပြီးခဏနားကြတယ်။မဲခေါင်
မြစ်ရေကနောက်ပေမဲ့ အဲ့ဒီချောင်းရေက ကြည်လင်နေရော။သူတို့ ၂ ခု ဆုံတဲ့နေရာမှာနားကြတယ်။သမ္ဗာန်သ
မားတွေကတော့ ချောင်းထဲ ရေကူးပေမဲ့ အခက်ကြုံတာက ကျမ ။ ရေမကူးတတ်ဘူးလေ။ ချောင်းက နက်တယ်။
နောက်မှ လမ်းပြနဲ့ကျမ ချောင်းတောက်လျှောက်လိုက်ကြည့်မှာ တနေရာမှာကျောက်ဖျာ အစွန်းတခုတွေ့မှ
နောက်ကျမတို့ ခရီးဆက်ကြတယ် ။ တချို့နေရာ မြစ်ရဲ့တဘက်တချက်မှာ တဲတလုံးစ နှစ်လုံးစတွေ့တာပေါ့နော်။
နောက်သူတို့ပြောပြတာက ဟိုဘက်က မြန်မာပြည် ဒီဘက်ကလောဝ် ပေါ့လေ။ မြန်မာပြည်ဘက် အဲ့ဒီအချိန်က
အဲ့ဒီ ရှမ်းရွာတွေဘက်မှာ ဘုန်းကြီးတပါးနာမည်ကြီးနေတယ် .။ စေဝ်ဝန်းစွန့် ဆိုလားဘဲ ..အဲ့ဒီဘက်ပိုင်းက လူတွေ
တော်တော်သွားဖူးကြတယ်လို့ သမ္ဗာန်သမားကရှင်းပြနေသေးတယ်။ နောက်တော့ ညနေပိုင်း ၆ နာရီ လောက်မှာဒီ
လောဝ် ဘက်က မုမ်းမမ်း(Muangmom)ဆိုတဲ့ရွာကို ရောက်တယ် ။ ဒါကျမရဲ့ လောဝ် ခရီးဆုံးတဲ့ ရွာလေးပါဘဲ ။
ဒါပါဘဲ ။နာမည်ကျော် ရွှေတြိဂံ နယ်မြေ ။ မြန်မာ ယိုးဒယား လောဝ် ၃ နိုင်ငံ မဲခေါင်မြစ်မှာ ဆုံတဲ့နေရာပေါ့ ။
ကျမ ရောက်နေတဲ့ လောဝ်ရွာ မုမ်းမမ်း(Muangmom) ရဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ကတော့ မြန်မာပြည် မုမ်းလင်း(Monglin)
ရွာလေးပေါ့ ။ မြန်မာနိုင်ငံတော်အလံလွှင့်ထူထားတာမြင်ရတော့ စိတ်ထဲ ခံစားချက်တခုဖြစ်တာအမှန်ဘဲ ။ ဘာ
မှန်းတော့လဲ မဖေါ်ပြနိုင်ဘူး။လောဝ်ကလမ်းပြအမျိုးသမီးရယ် ၊ တရုပ်ကလမ်းပြ စိုင်းခမ်းပန်းရယ် ၊ ကျမ ရယ်
လောဝ်ပိုင် မုမ်းမမ်းရွာလေးမှာနေ ဖို့အိမ် သမ္ဗာန်သမားကရှာပေးတယ်။ကျမတို့ သမ္ဗာန်ဆိုက်တဲ့နေရာက
မနက်ဆိုဈေး ပေ့ါနော်။ ဒါနဲ့ အဲ့ဒီည ရွာခံအိမ်တအိမ်မှာတည်းခိုခဲ့ကြရတယ်။
၂၁. ၄. ၁၉၉၃ ( ဗုဒ္ဓဟူး )
မနက်မိုးလင်းကျမတို့ဈေးဘက်လျှောက်လာကြတော့ မြန်မာကမ်းဘက်က ရဲဘော်တချို့ လောဝ်ဘက်မှာဈေးလာ
ဝယ်ကြတာတွေ့တယ်။ ကျမနဲ့စိုင်းခမ်းပန်း နဲ့ မော်တော်တစင်းငှားပြီး ယိုးဒယား နိုင်ငံ ချိန်းဆိုင်(Chiang Sane)
ကိုသွားကြတယ်။ချိန်းဆိုင် ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်က လောဝ် ရွာပေါ့ ။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် အများအပြားကိုတွေ့ရ
တယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာParadise Resort တောင်မရှိသေးပါဘူး။
ဆိုတော့ ကျမ ချိန်းမိုင် မှာကျမကိုစောင့်နေတဲ့ ပီစိုင်းထွန်းဆီ ဆက်သွယ်တော့ ကျမကို ဒီ မြန်မာပြည်တာချီလိတ်
တဘက်ကမ်း ယိုးဒယား နိုင်ငံ မယ်ဆိုင်မြို့ မှာစောင့်နေဖို့ ပြောတယ်။ဒါနဲ့ ၂၂.၄.၁၉၉၃ မှာ ကျမ မုမ်းမမ်း ကနေ
ထွက်ပြီး မယ်ဆိုင်ကို ရောက်ရှိခဲ့တယ်။ မယ်ဆိုင်မှာ တရက်နေပြီး နောက်တနေ့ ၂၃ ရက်နေ့မှာပီစိုင်းထွန်း အကြို
လွှတ်လိုက် တဲ့သူနဲ့ ချိန်းမိုင်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီး ညမှာဘဲ ပီထွန်းနဲ့ အတူ ချိန်းမိုင်လေဆိပ်မှ ဘန်ကောက်မြို့
ကျမ ဘန်ကောက်မြီု့မှာရှိနေစဉ် အကိုတော်စပ်သူ ပီစိုင်းထွန်းအိမ်မှာဘဲ Australia ထွက်ခွာလာသည်အထိနေထိုင်
ခဲ့ပါတယ်။ပီထွန်းရဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှု့ကြောင့် ခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ်ကိုတော့ တခါတရံသွားတတ်ပါတယ်။ KIA မှ မထွက်
ABSDF တောင်ပိုင်းဗဟိုကိုမိုးသီးဇွန်ဘက်မှ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုကိုဦးနှင့်ကိုဘတိုးတို့သာပီစိုင်းထွန်း
ကျမရဲ့ဒီခရီးစဉ်ကို ကိုကိုဦး ကိုပေးခဲ့ပါတယ်။
မှတ်မှတ်ရရ ၁၉၉၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့မှာ ကျမတို့ကို ရက်ရက်စက်စက်ပြုလုပ်ခဲ့သူတွေထဲက တဦးဖြစ်တဲ့
ABSDF-NB ဥက္ကဌ အောင်နိုင် ခေါ် ရော်နယ်အောင်နိုင် ထံမှ ဖုန်းဖြင့်ကျမထံဆက်သွယ်လာပါတယ်။သူချိန်းမိုင်ရောက်နေ
ကျမက အောင်နိုင် ခေါ် ရော်နယ်အောင်နိုင် ( RAN) ကို ဖြစ်သွားတာတွေအားလုံးမှားကြောင်း။ တာဝန်ယူဖြေရှင်းဖို့လို
ကြောင်းပြောခဲ့တယ်။ ABSDF-NB မှာကျန်ရစ်ခဲ့သူတွေ ကိုဘာမှဆက်မလုပ်ဖို့။မသတ်ဖို့အတန်တန်ပြောခဲ့တယ်။အောင်နိုင်
ABSDF-NB ကို ပြန်သွားတော့ ကျမနှင့်ပြောကြားခဲ့တာတွေကို ကိုကျော်နိုင်ဦး (ကြောင်) နဲ့ အလံတိုင်ကုန်းအနောက်က
ဘားတိုက်မှာပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ် လို့ ကြောင်က ခုကျမကို ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့တယ်။
Australia မှ ရှေ့နေဖြစ်သူ ဖီးလစ်စမိုက် မှကျမကိုတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ဖြင့် ခေါ်ယူတဲ့အတွက် UNHCR မှာ လုပ်နည်းများကို
ခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ်တိုက်မှ မောင်မောင်ထွန်း တို့မှ ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာ Sydney ကိုထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။
You, Ko Lin Wai Aung, Aung Than Nyunt Aungnilai, Soe Lynn and 21 others like this.
Han Minn Theinn Very hard life,Sis......
November 24, 2012 at 10:01am · Like
Phyo Mg Mg Win အစ်မမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာရင်စာအုပ်
လှန်ရေးသမား ဘယ်သူက ဖောက်ပြန်
သိရမယ်အစ်မ ကိုမောင်မောင် ကိုညီညီ
November 24, 2012 at 10:08am via mobile · Like · 6
မိုး စဲ နေပူပူ ဖုန်ထူထူနဲ့ ဆိုတော့ အေးမျှမျှ လိုင်စင်မြေကို သူက ပြန်လွမ်းနေသေးတယ် ခုရော အဲ့လို နေပူပူ ဖုန်ထူထူဆို လိုင်စင်ကိုလွမ်းသေးလား.. ဒီ မပ ပြန်တွေကိုတော့ မနိုင်ပါဘူး..
November 24, 2012 at 10:11am · Like · 1
Nang Aung Htwe Kyi ရော် .. ပျော်စရာတွေ အများကြီး ကြုံခဲ့ကြရပါတယ်လေး ..
November 24, 2012 at 10:29am · Like · 1
မိုး စဲ ပျော်စရာတွေလဲ ကြုံရင်ရေးပါဦး..ဟဲ. ရင်ခုန်ပျော်ရ လိုင်စင်မြေ မှ ဆိုတာမျိုးပေါ့..ဒါမှမဟုတ် ပျော်ကြမော်ကြပလေ လိုင်စင်မြေ..ဒီနာမည်တွေနဲ့တော့ မရေးပါနဲ့လို့ ပြောတာ..း)
November 24, 2012 at 10:33am · Edited · Like · 2
Phyo Mg Mg Win ဘာတွေပျော်စရာရှိလည်းဗျာ ဒီလောက်
November 24, 2012 at 10:34am via mobile · Like · 3
မိုး စဲ အော..အဲ့ဒါပြောတာ.ညီလေးရေ..၈၈ တုန်းက တောခိုခဲ့တဲ့ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး လုပ်ခဲ့ကြသူတွေ စိတ်ဓါတ်ဟာ တော်ရုံနဲ့ စိတ်ဓါတ်ကျ တတ်တဲ့ သူမျိုးတွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး..သူတို့ တွေ ယုံကြည်ချက်အတွက် လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်း ပျော်ရွှင်စရာ ကြည်နူးချမ်းမြေ့ စရာလေးတွေလဲ ရှိမှာပါ..ရက်စက်ယုတ်မာသူ အာဏာရူးတွေနဲ့ နောက်လိုက်တချို့ကြောင့် လူမဆန်တဲ့နေရာ ဖြစ်သွားတာပါ..
November 24, 2012 at 10:37am · Like · 6
Nang Aung Htwe Kyi Phyo Mg Mg Win >> ရေ.. အမှတ်တရ လေးတချို့ ရေးထားတယ် ။ဖတ်ကြည့်နော် ....See More
မငယ်ရေ စာရေးပါဦးတဲ့ ။ ABSDF - NB မြောက်ပိုင်း ကျောင်းသားတပ်မတော် မှ ဘယ်လို လွတ်မြောက်လာလဲ ဆိုတာတဲ့ ။မှတ်တမ်း အနေနဲ့ သိခြင်ပါတယ်တဲ့... ဆိုတော့ ကြိုးစားပြီးရေးလိုက်ပါတယ် ။ စာရေးဆရာ မဟုတ်တော့အရှေ့အနောက် ဟိုရောက်ဒီရောက် ဆိုရင်လဲ သီးခံပြီးသာ ဖတ်ကြပါတော့ ။ ...
By: Nang Aung Htwe Kyi
November 24, 2012 at 10:38am · Like · 3
Phyo Mg Mg Win ကျေးဇူးပါ ကျွန်တော် ပြန် share မယ်
November 24, 2012 at 10:41am via mobile · Like
Nang Aung Htwe Kyi https://www.facebook.com/notes/nang-aung-htwe-kyi/%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8-%E1%81%82-/407026032665653
မနောမြေမှကျောင်းသားတပ်မတော်အပိုင်း ( ၂ )
ဒီနေ့မနက်အိပ်ယာထတော့လဲထုံးစံအတိုင်းပေါ့ ။ ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်းရယ် ရှင်သန်မှု့အတွက...See More
November 24, 2012 at 10:49am · Like · 1
Nang Aung Htwe Kyi https://www.facebook.com/notes/nang-aung-htwe-kyi/%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8-%E1%81%83/410654365636153
၁၂.၀၂.၁၉၉၂ မှာ ကိုထွန်းအောင်ကျော်နဲ့အတူကျောင်းသား ၁၅ ဦးကို လူမဆန်စွာခေါင်း ဖြတ်...See More
November 24, 2012 at 10:51am · Like · 1
Nang Aung Htwe Kyi ...See More
မနောမြေမှကျောင်းသားတပ်မတော်အပိုင်း ၄ ... ငရဲတွင်းမှလွတ်မြောက်ခြင်း
လွတ်မြောက်ခြင်းရဲ့အစကနဦး ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်ခဲ့တယ်။၁၉၉၂ ခုနှစ် မေလ ၂၁ ရက်နေ့ ညမှာ ...See More
November 24, 2012 at 10:52am · Like · 1
မနောမြေမှကျောင်းသားတပ်မတော် အပိုင်း ၅ ... ငရဲတွင်းမှလွတ်မြောက်ခြင်း
၁၉၉၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂ ရက် ညပိုင်းဆိုတော့ ကျမတို့ ABSDF-NB မြောက်ပိုင်းကျောင်း...See More
November 24, 2012 at 10:52am · Like · 2
မနောမြေမှ ကျောင်းသားတပ်မတော် အပိုင်း(၆) ... နှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်မနောမြေ ..။
အခုရေးမဲ့ ခရီးစဉ်မှာ ကျမရဲ့ မှတ်စုတို တချို့ ပျောက်ဆုံးသွားပါသဖြင့် ဖြတ်သန်းခဲ့...See More
November 24, 2012 at 10:53am · Like · 1
အောင်နိုင်ခေါ်ရော်နယ်အောင်နိုင် နှင့် BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်
ဒီတခါတော့အားလုံးသေသေချာချာသိအောင်ရေးပြရတော့မယ်။BBCနဲ့အောင်နိုင်၊ အောင်နိုင်နဲ့B...See More
November 24, 2012 at 10:55am · Like · 2
ကိုနိုင်အောင်ရဲ့  သြဂုတ်လ ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှ မေလ ၁၉၉၂ ခုနှစ် အထိ ABSDF-NB မှာ ဖြစ်ပွ...See More
November 24, 2012 at 10:56am · Like · 2
Nang Aung Htwe Kyi https://www.facebook.com/notes/nang-aung-htwe-kyi/%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%96%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%B6%E1%80%9B%E1%80%9E%E1%80%B0%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%81%E1%81%9A%E1%80%9E%E1%80%B6/345222028846054
သမိုင်းအဖျက်ခံရသူများ၏ .. စိမ်ခေါ်သံ
သမိုင်းအဖျက်ခံရသူများ ၏ ..စိမ်ခေါ်သံ ကြောက်စရာမလို ပုန်းစရာလဲမလို ပြေးစရာမလို ...See More
November 24, 2012 at 10:58am · Like · 1
Nang Aung Htwe Kyi https://www.facebook.com/notes/nang-aung-htwe-kyi/%E1%80%84%E1%80%9B%E1%80%B2-%E1%80%8A%E1%80%90%E1%80%8A/462440960457493
AB မြောက်ပိုင်းပြန်တွေ ..သူမတူ ခံစားခဲ့ရတဲ့ဒဏ်တွေနဲ့ အသက် ၉ဝ .. မထင်ပေါင် ...See More
November 24, 2012 at 10:59am · Like
Nang Aung Htwe Kyi https://www.facebook.com/notes/nang-aung-htwe-kyi/%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%99%E1%80%9F%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC-%E1%80%84%E1%80%AB/409478252420431
ငါဟာ စာရေးဆရာတယောက် မဟုတ်ဘူး ဒါပေမဲ့ စာကြောင်းတွေ ရေးခြစ်နေမိတယ်။ ငါဟာ ကဗျာဆရ...See More
November 24, 2012 at 11:00am · Like · 1
Nang Aung Htwe Kyi https://www.facebook.com/notes/nang-aung-htwe-kyi/%E1%80%9C%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8/441647805870142
တခါက ကတိစကားတခုပြုခဲ့တယ်.. ပြုခဲ့တဲ့ ကတိစကားစုအတွက် လမ်းတခုကိုလျှောက်လှ...
November 24, 2012 at 11:02am · Like
၁၉၉၂ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၂ ရက် (ပြည်ထောင်စုနေ.) တွင် ABSDF (NB) တွင် ရက်စက်စွာ ညှင်းဆဲသတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသော ကိုထွန်းအောင်ကျော်နှင့် ရဲဘော်များအား ရည်စုး၍ ကြွေလွင့်ခဲ့သော ကြယ်ပွင့်များ အား တိုင်တည်ခြင်း ကိုကြီးရေ ဒီနေ.နှစ် ၂၀ ပြည့်ခဲ့ပြီ မငယ်တစ်ေ...
November 24, 2012 at 11:04am · Like · 1
Kotoe NB မငယ်ပြောသလိုတခါတလေလည်
November 24, 2012 at 7:13pm via mobile · Like · 1
Robert Hla Tun ဒီလိုအတွေ့အကြုံမျိုးတွေတော်ရုံသူတွေမှာမရှိနိုင်ပါဘူး။ အမရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုတကယ်လေးစားတယ်။
November 25, 2012 at 12:00am · Like
Kyaw Kyaw Naing အစ်မမြန်မာပြည်ကိုဘယ်တော့လောက်ပြန်လာဖြစ်မလဲ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုလျက်ပါအစ်မ။
November 25, 2012 at 5:20am via mobile · Like · 2
K Ki Ki ဘုရား တရား သံဃာ မိဘ ဆရာ ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကြောင့် .. သေကံမရောက် သက်မပျောက်ခဲ့တဲ့ ငါ့ညီမ တယောက် ..အိပ်မက်ဆိုးတွေ မကြာခဏပြန်လည် မြင်မက်နေရခြင်း မှ ကင်းလွတ်ပါစေ... ရာဇဝင်ကြွေးရှိခဲ့သူများလည်း.. ကြွေးဟောင်း မြန်မြန်ဆပ်နိုင်ကြပါစေ..
November 25, 2012 at 8:57am · Like · 1
Harry Lwin မငယ် ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်က ၁၇၅ဝ ဆိုတော့ ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ရွှေ (ကြည်း-၃၅၀၅) (NLD ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း) တို့ ထက်တောင် စီနီယာကျနေပါသေးလား ...ေိခိ ... ဦးနှောက်မရှိတဲ့ ကောင်တွေ
January2at 11:56am · Edited · Like · 1
Posted by ဘရာဇီးငှက်ရိုး at 8:37 PM